गुलियो खाँदा किन दाँतमा कीरा लाग्छ ? – NagrikPath
गुलियो खाँदा किन दाँतमा कीरा लाग्छ ?
Nagraikpathadmin February 25, 2019	No Comments
स्वस्थ दाँत धेरै बलियो हुन्छ । दाँत बलियो हुनुको कारण यसको बाहिरी भागलाई ढाक्ने कडा बस्तु दाँतलाई बाहिरबाट इनामेल (Enamel) हो । इनामेल सेतो रंगको हुन्छ । यो नै हाम्रो शरीरको सबैभन्दा कडा बस्तु हो । इनामेलले ढाकेको भन्दा भित्रपट्टिको दाँतको भागलाई डेन्टाइन (Dentine) भनिन्छ । यो भाग चाहिँ इनामेल जस्तो कडा हुँदैन । यो भाग नरम हुने भएकोले मौका पाएमा कीटाणुहरु सजिलै यसमा पस्न सक्दछन् । दाँतको यस भागलाई इनामेलले छोपेर राख्ने हुनाले सजिलै यस भागमा कीटाणु पस्न सक्दैन । डेन्टाइनभन्दा तलको दाँतको भागलाई पप क्याभिटी (Pup Cavity) भनिन्छ । गिजाभन्दा बाहिर निस्केको दाँतको भागलाई क्राउन (Crown) भनिन्छ ।
हाम्रा मुखभित्र लाखौंको संख्यामा कीटाणुहरु हुन्छन् । मुखमा हुने यस्ता कीटाणुहरुलाई ब्याक्टेरिया भनिन्छ । यी ब्याक्टेरियाहरुमध्ये धेरैजसो मानिसका लागि फाइदाजनक हुन्छन् । किनभने, यिनीहरुले खानेकुरालाई टुक्र्याएर, गलाएर मानिसले सजिलै पचाउन सक्ने बनाइदिन्छ । तर साथसाथै, कतिपय ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ हानी गर्ने खालका पनि हुन्छन् । मुखमा हुने ब्याक्टेरियाहरुमध्ये एसिड उत्पादन गर्ने ब्याक्टेरियाहरु (Acidogenic bacteria) हरु चाहिँ दाँतका लागि शत्रु नै हुन्छन् ।
सबैले भन्ने गर्छ, धेरै गुलियो कुरा खानु हुँदैन । चिनी, चकलेट धेरै खायो भने दाँतमा कीरा लाग्छ भनेर सबैले भन्ने गर्छ । यो कुरा सही पनि हो । किनभने, हामीले गुलियो वस्तु खाँदा त्यसका केही अंशहरु हाम्रो दाँतमा अड्किएर बसेको हुन्छ । धेरैजसोको गुलियो खाएपछि दाँत ब्रस गरिहाल्ने बानी हुँदैन । गुलियो नखाने मानिसको दाँत पनि नियमित सफा गरेन भने दाँतमा कीरा लाग्ने गर्छ किनभने खानेकुराहरुमा पाइने कार्बोहाइड्रेड पनि गुलियो कै एक रुप हो । यसरी गुलियो खाँदा वा नखाँदा पनि दाँत सफा गरेन भने कीरा लाग्नुको कारण चाहिँ त्यसैले त्यस्तो गुलियो वस्तुहरु वा कार्बोहाइड धेरै बेरसम्म दाँतमा अड्केर बसिबस्नु नै हो । त्यसरी दाँतमा अड्किएको गुलियो वा कार्बोहाइड्रेडलाई मुखमा हुने एक किसिमको व्याक्टेरियाले अमिलो (एसिड)मा बदलिदिन्छ । । यसरी दाँतमा अमिलो बन्यो र केहीबेरसम्म त्यत्तिकै रह्यो भने त्यसले इनामेललाई खियाइदिन्छ । धेरै गुलियो खानेहरुको दाँतमा कीरा लाग्नु वा दाँत बिग्रनुको खास कारण नै यही हो । किनभने धेरै गुलियो खानेहरुले सधैं दाँत सफा गरिबस्दैन । सधैं दाँत सफा नगरेपछि उनीहरुको दाँतमा ब्याक्टेरियाले अमिलो बनाइदिइबस्छ ।
दाँतको इनामेल नयाँ निर्माण भइरहेको हुन्छ तर पूरै दाँत आफैं पुनर्निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले दाँतमा कीरा लागिहाल्यो भने दाँतको डाक्टरलाई देखाइहाल्नुपर्छ । साभारः राताेपाटी
–स्रोतः एम.एस. इन्कार्टा, बालविज्ञान प्रश्नोत्तर
Previous Previous post: सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा, अस्पताल पुगेका बिरामी अलपत्र
Next Next post: फैलिँदै अंग्रेजी भाषाको ‘भाइरस’ : विदेशी योजनामा अभिभावक र शिक्षक नै भ्रमित !